ဆိုးလ် Love - Zhuji Feihu ချည်မျှင်စက် Co. ,, Ltd မှ
ဆိုးလ်မြို့တစ်အရသာ gastronomic ရွေးချယ်မှုနှင့်ပြည့်ဝ၏ခေတ်သစ်မြို့အဖြစ်အကြီးဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်, သမိုင်းဆိုင်ရာမြင်ကွင်းများ, နှင့်စျေးဝယ်ဖို့သောနေရာများ.
ဆိုးလ်သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်နွေရာသီစောစောကျဆုံးခြင်းအကြားနွေးထွေးသောရာသီဥတုစဉ်အတွင်းဖြစ်ပါသည်. ဧပြီသို့မဟုတ်စက်တင်ဘာလအပန်းဖြေအခြေအနေများအတွက်အကောင်းဆုံးလအတွင်းများမှာ. သငျသညျထပြင်ပတွင် Adventures နှင့် skying နဲ့တူပါလျှင်ဆောင်းရာသီသည်ကောင်း.
ဆိုးလ်မြို့ရှိ, သငျသညျသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရထားသုံးခုအဓိကပုံစံများရှိ, ဘတ်စ်ကား, မြေအောက်ရထား, နှင့်တက္ကစီ. ဆိုးလ်မြို့ပတ်ပတ်လည်ရဖို့အမြန်ဆုံး option ကိုလေဆိပ်ရထားလမ်း Express ကိုရထားဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာ options နှစ်ခုဟာအမြန်နှင့်အားလုံးရပ်တန့်ရှိပါတယ်. အလုံးစုံရပ်တန့်မှာကိုရပ်တန့်ပါလိမ့်မယ်အဖြစ်အမြန် option ကိုအမြန်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါသည် 12 ဆိုးလ်ဘူတာမှာမရောက်မီဘူတာ. အလုံးစုံရပ်တန့် option ကိုစျေးနှုန်းချိုသာပေမယ့်, အဲဒီအကြောင်းဖွင့် 15 အဆိုပါအမြန် option ကိုထက်နှေးကွေးမိနစ်.
ဆိုးလ်နှင့်အတူကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံးမြေအောက်ရထားဘူတာရုံ၏တဦးတည်းရှိတယ် 14 လိုင်းများ. ဒါဟာနည်းနည်းစိုးရွံ့ထင်ရစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်သင်ကရန်အသုံးပြုရတစ်ချိန်က, ဒါဟာတော်တော်လေးလွယ်ကူ.
ဆိုးလ်မြို့ပတ်ပတ်လည်ရဖို့နောက်ထပ် option ကိုကားငှားဖို့ဖြစ်ပါတယ်. ဆိုးလ်တို့သည်ကြီးစွာသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်အားရှိပါတယ်ဒီအရာကအနည်းဆုံးသုံးရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်တယ်.
Myeongdong – ခရီးသွားဧည့်မယ့်ပေါ်ပြူလာရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာအကြီးအကုန်တိုက်ကြီးတွေရှိပါတယ်, အကြီးအအစားအစာ, နှင့်တက်ကြွတွေကတော့. သင်ကဒို့အရေးဆိုးလ် Myeongdong မှာနေဖို့နိုင်ပါတယ်.
Gangnam သီချင်း Gangnam Style ကိုမှကျော်ကြားသောကျေးဇူးတင်စကားဖြစ်လာခဲ့သည်တစ်ခရိုင်ဖြစ်ပါတယ်. Gangnam အတွက်အကောင်းဆုံးဒေသများ၏တဦးတည်း Garosugil ဖြစ်ပါသည်. ဒီနေရာတွင်မှုပညာရှငျနှငျ့ကဖေးကိုတွေ့လိမ့်မည်, အနုပညာပြခန်း, လက်လီစတိုးဆိုင်များ. ဒီဧရိယာထဲမှာတစ်ဦးကအကြီးဟိုတယ် option ကို Dormy အင်းပရီမီယံဆိုးလ် Garosugil ဖြစ်ပါသည်.
Insadong – အဆိုပါအထက်တန်းလွှာများသည်မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်မိသားစုများ၏အိမျခဲ့သည်. ဒီနေရာတွင်ရိုးရာအိမ်များကိုတွေ့လိမ့်မည်, ကိုရီးယားအနုပညာပြခန်း, ဖက်ရှင်ဖက်ရှင်ဆိုင်များ, ညားဘုံဗိမာန်, နှင့် teahouses. ဆက်နေရန်နေရာကောင်းတစ်ခုဟာ CenterMark ဟိုတယ်ဖြစ်ပါသည်.
Everland – ကိုရီးယားတွင်အကြီးဆုံးဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံ
Lotte ကမ္ဘာ့ဖလား – -အဆုံးသတ်ဘယ်တော့မှစိတ်လှုပ်ရှားစီးနှင့်အတူကလေးတွေအဘို့ကြီးစွာသောဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံ.
teamLab ကမ္ဘာ့ဖလားဆိုးလ် – အနုပညာတစ်ခုထူးခြားဆန်းပြားပြတိုက်ဖြစ်ပါသည်, အကအခုန်, နှင့်နည်းပညာ.
N ကိုဆိုးလ်မျှော်စင် – သငျသညျထိုမွို့၏ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာအမြင်များယူနိုင်သောနေရာအဖြစ်အထင်ကရမိုးမျှော်တိုက်ဖြစ်ပါတယ်.
TrickEye 3D ပြတိုက် – သငျသညျဓါတ်ပုံချစ်ကြလျှင်. ဒီပြတိုက်အတွက်, သငျသညျ wacky ဓါတ်ပုံကိုတွေ့လိမ့်မည်.
Gyeongbokgung နန်းတော် – ရှေးအကျဆုံးနှင့်အကွီးမားဆုံးရှေးဟောင်းဘုံဗိမာန်၏တဦးတည်း.
Hangang မြစ်ကူးတို့ Cruise နဲ့ – မြို့မြင်ကွင်းကျယ်ကိုခံစားရန်အံ့သြစရာလမ်း.
Dongdaemun စျေး – ဒီနေရာတွင်တှေ့လိမျ့မညျ 26 ပတ်ပတ်လည်စျေးဝယ်ကုန်တိုက်အိမ်ရာ 50,000 ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်လုပ်သူများနှင့် 30,000 သင် trendiest ပိတ်ထည်ကိုဝယ်နိုင်မည့်အထူးဆိုင်များ.
Namdaemun စျေး – ဤသည်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင်ရှေးအကျဆုံးစျေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာရှိပါတယ် 400 မက္ကာအိမ်များ, 10,200 စတိုးဆိုင်များ. သင်လိုအပ်သမျှကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်, အဝတ်အနေဖြင့်မီးဖိုချောင်သုံးနှင့်အီလက်ထရွန်းနစ်မှ.
Insadong – သငျသညျအနုပညာလက်ရာများနဲ့တူရိုးရာအမှတ်တရပစ္စည်းများရှာတှေ့နိုငျသည်အဘယ်မှာရှိ, လက်ဖက်ရည်, ကြွေထည်, နှင့်စက္ကူကုန်စည်.
စစ်မှန် bibimbap များအတွက်, သင် Myeong-dong ခရိုင်အတွင်းရှိ Gogung ကြိုးစားသင့်. သငျသညျကိုအကောင်းဆုံး option ကိုဝမ် Bi Jib နှင့် Gangnam ရဲ့ Sutbul Mapos Galbi ဖြစ်ပါတယ်ကိုရီးယား BBQ အစားအစာများကြိုးစားရန်လိုပါလျှင်. သင်ကြက်သား skewers နှင့်ဝက်သားဝမ်းရှိနိုင်ပါသည်ဘယ်မှာရှိနိုင်ပါလမ်းပေါ်တငျးကုလည်းရှိ.
သငျသညျ Raspberry အရသာနှင့်အတူတစ်ဦးသည်စပျစ်ရည်-liqueur ဖြစ်သောသင် Bokbunjaju ရှိဆိုးလ်ထဲတွင်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြည့်အချိုရည်တွေထဲမှာ, ကိုရီးယားဗော့ဒ်ကာ soju နှင့်ထက်ပို 40 ဗော့ဒ်ကာအမျိုးပေါင်းနှင့် 200 ဝိုင်.
နောက်တစ်ခု : မိုင်ယာမီခံစားကြည့်ပါ